Jiinoow – War La Helaa Talo La Helaa
Home » Author Archives: Jiinoow
Author Archives: Jiinoow
Jiinoow 19/08/2017	138 Views
Jiinoow 19/08/2017	112 Views
Degmada Balli Khadar ee gobolka Bari wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in qaar kamid ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee maamulka Puntland gaar ahaan kuwa qaabilsan arrimaha miino baarista ayaa ku geeriyooday qarax lagula eegtay deegaankaas. Warbaahinta afka shabaab kuhadasha ayaa werineysa hadalkaas, waxaana la aaminsan yahay in dhawr askari ay naftooda halkaas ku waayeen. Wixii ...
Jiinoow 19/08/2017	334 Views
Madaxwaynihii xilka laga xayuubiyay ee Cali Cabdullahi Cosoble ayaa galabta soo gaaray magaalada Muqdisho, si uu ula kulmo qaar kamid ah wufuud caalami ah oo beesha caalamka mataleysay. Xarunta xalane oo saldhig u ah beesha caalamka ayuu shir kula qaatay Cosoble wakiiladaas, isagoona u gudbiyay dacwad ka dhan ah dawladda Soomaaliya oo uu sheegay in ay ka dambeysay xilka qaadistii ...
Jiinoow 19/08/2017	407 Views
Jiinoow 19/08/2017	335 Views
Jiinoow 19/08/2017	858 Views
Deegaanka Bariirre ee gobolka shabeelleaha Hoose warar naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in halkaas uu ka qarxay dagaal hubka culus iyo kan fudud ba la isku adeegsaday oo u dhaxeeya Alshabaab iyo AMISOM, waxaase xusid mudan in ciidan caddaan ah ay qayb ka yihiin dagaal. Deegaanka Bariirre wuxuu 30-KM u jiraa qiyaastii degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, marka ...
Calool Xumo! Alshabaab Oo Soo Bandhigay Sawirrada Askartii Ay Ka Dileen Puntland Bishii Ramadan
Jiinoow 19/08/2017	294 Views
Kooxda Alshabaab qeybteeda u qaabbilsan arrimaha borobagaandada ee loo yaqaano Al-Kata’ib ayaa soo bandhigtay sawirro ay ku sheegeen in uu ahaa weerarkii ay ciidamada badan uga dileen Puntland ee dhacay bishii Ramadan. 8-June sannadkan oo dhanka kale ku beegneyd 14-kii bishii Ramadan ee naga tagtay, Alshabaab ayaa weerar ku qaadday degmada Af Urur ee gobolka Bari, halkaas oo ay kusugnaayeen ...
Jiinoow 19/08/2017	99 Views
Qaar kamid ah wasiirrada dawladda Soomaaliya ayaa hadda kusugan magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle Soomaaliya. Shirar kala duwan ayeey la yeesheen xildhibaannada, siyaasiyiinta iyo indheer garadka kasoo jeeda maamulkaas, si xaaladda ugu yaraan sidan wax looga baddalo. Mas’uuliyiin ay kamid yihiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Juxa, wasiirka amniga gudaha mudane Isloow iyo qaar kale oo kamid ah mas’uuliyiinta maamulka ...
Jiinoow 19/08/2017	313 Views
Jiinoow 19/08/2017	731 Views
Abwaan Xasan Ganeey waa mid kamid ah abwaannada Soomaaalida ay leedahay kuwooda ugu wanaagsan, haddaba goormaa kugu dambeysay abwaanka. Jimcihii ayuu ruxay magaalada Hargeysa, oo uu ka jeediyay Maanso aad loola yaabay, ee hoos Ka daawo Muuqaalka Maansadaas.